Fantsom-pandrefesana vy roa tanimanga mitaingina vy Valve, China Shina roa vy mitafy vy Oilfield mitsingevana Ball Valve mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (valiny Titan no marika anay)
Titan roa tanimbary oilfield kofehy baolina kofehy ho anjara toerana lehibe amin'ny fandehanana ambony amin'ny alàlan'ny endrika voamarina. Valizy baolina kitrokely misy kiran'i Titan roa no manana rafitra kaody miloko ahafantarana azy mora foana. Fanosorana menaka manitra ho an'ny fanosorana mora sy fitaovana fanidiana enta-mavesatra mavesatra hisorohana ny fandidiana tsy nahy.
Titan-tsipika baolina kofehin'ny menaka roa vita amin'ny solika dia manome valves ny valin'ny solika avy amin'ny 1 "ka hatramin'ny 4" ary hatramin'ny 5000 psi. Manolotra fanamboarana vatan-kiho koa isika izay azo ianteherana bebe kokoa.
● Halavan'ny habe: 1 ”- 4”
● Vatana vy
● Hatramin'ny 2000PSI
● Seza RPTFE / Delrin
● Fitaovana fanidiana adidy mavesatra
● Tombo-kase avo roa heny O-Ring
● Fipoahana porofo mipoaka
● Menaka mety amin'ny fanosorana mora
● Ny vehivavy NPT misy kofehy dia mifanaraka amin'ny ANSI B1.20.1, BS21, DN 259/2999
● Iron an-tsokosoko avo lenta ho an'ny fanoherana ny harafesina tsara kokoa sy ny tanjaky ny vokatra lehibe kokoa
1 Body A395 Iron vy
2 Cap A395 Iron vy
4 seza RPTFE / Delrin
5 SAMPA SS 304
6 Mpanasa volo RPTFE
7 Tapa-peratra O-Ring Viton
8 Bearing Bearing PTFE
9 Atsaharo ny vozon'akanjoko A194 2H
11 Hazavao A395 Iron vy
13 Tombo-kase Viton
14 Volana fikolokoloana A193 B7
15 Ajanony ny bolt A193 B7
16 Pin amin'ny Screw Varahina sy vy
Size Color WP D L H W Lanjan'ny LBS